Raha izaho no mipetraka any ETAZONIA, ary dia toy mahery vaika momba ny fandehanana ka ny ankizivavy sy ny fanomezana azy ireo ny maro, tahaka ahy amin’ny pinays aho mety ho any am-ponja amin’izao fotoana izao, ary raha kely indrindra dia mety ho ‘f avy rehetra ny toeram-pivarotana sy ny manodidina izay aho no nipetraka. Raha ny tena marina dia tsy misy zavatra tsy mety mandeha ny zazavavy, dia nilaza taminy izy mahafatifaty, sy ny manome azy ny maro. Tsy misy ratsy tsy ratsy, ary izay no tena halehiben’ny zavatra ataoko. Fa izaho tena sasany aho raha nanao izany amin’ny maha-be tsy misy toy izay efa vita eto ny zavatra ratsy mety hitranga. Efa polo avy ny isa, fotoana io taona lasa. Tamin’ny voalohany, dia nanoratra afa-tsy ny namerenana eo amin’ny taratasy iray ary nahazo ahy ny kiritika kely dimy lahatsoratra indray ny hiverina. Avy eo, indray andro dia nanapa-kevitra ny hanomboka ny fanoratana ny fisainana sy ny mahafatifaty hafatra azy sy ny isan-jato nitsambikina ny momba ny. Fa dia tsara loatra ny miverina eo amin’ny fotoana lavabe ny fampiasam-bola, satria misy andro izay afaka mandeha any amin’ny toeram-pivarotana lehibe sy tsy mahita tovovavy mendrika manakaiky ny ora. Na ihany no hitanao dia mandeha tanana amin’ny tanana miaraka amin’ny olon-tiany, na ny mamanao, na ao amin’ny hafa ny fomba ratsy toerana. Mariho ny voalaza ny toeram-pivarotana ary dia mazava fa ny toerana tsara indrindra mba hanao ny fomba fiasa. Dia mila fotsiny mba ho azo antoka fa manao izany amin’ny sasany ny fanajana, mitsiky izy, ary tsy ho loatra pushy raha ny ankizivavy dia mazava fa tsy liana. Raha ny toeram-pivarotana dia toerana tsara indrindra, dia ny dalana no tena ny ratsy indrindra ny toerana efa nanandrana. Noho ny antony mazava Filipinas dia be leerier ny kisendrasendra lehilahy nanatona azy ireo eny an-dalambe avy eo izy ireo dia ao anatiny ny toeram-pivarotana lehibe. Raha hitako mafana zazavavy eny an-dalambe, mba andramo izany, fa matetika-nitranga. Zavatra iray nianatra aho dia izay ny antony ny tsara fanahy kokoa ny faritra an-tanàna ianao ao, ny kokoa ianao dia hahazo ny lahatsoratra indray. Aho fa olo-mahantra dia mahantra ny ankizivavy dia mety ho ireo izay faly hihaona»manan-karena»hafa firenena, fa raha ny marina dia miasa tsara kokoa ny tsara kokoa-eny ankizivavy. Noho izany, ataovy ao an-tsaina rehefa nieritreritra izay mba hihaona Filipinas. Raha vao nanomboka ny fanaovana izany, izaho dia lavitra shyer momba izany mihoatra noho izao aho. Izany dia afaka ny ho tena hafahafa rehefa nanolotra ny tovovavy amin’ny tapa-taratasy, ary izy tsy maka izany, na izy foana hoe:»inona no izay.»ary dia mazava fa liana te hahalala nefa tsy haka azy io. Rehefa vita ny fomba fiasa, dia misokatra tsara toerana ao amin’ny toeram-pivarotana lehibe amin’ny tsy misy mijery, ankehitriny ianao dia manatona ny faritra be olona amin’ny maro ny maso mijery anao sy izay rehetra tianao hatao dia GTFO ny tsy misy. Ny tena hafahafa fotoana ho ahy efa ho Greenbelt toeram-Pivarotana lehibe ao Manila. Dia lasa an-jorony, ary nahita izany tena sexy pinay izay mafy valo angamba na dia ny sivy izay niasa tao amin’ny fivarotana kiraro namela ny fivarotana. Aho, dia tokony ho dimy ny tongony ao ambadiky azy, ary nahatsikaritra fa ny vahoaka thinned avy mialoha, ka dia niandry ny toerana sy ny niditra tao. Tsara ho lazaiko hi ary lazao azy ny fomba tsara tarehy izy dia izy no manao ny hiverina any an-efitra ny efitra fandroana. Izy no taitra ary milaza hoe: misaotra anao aho ary miezaka ny tanana azy ny ll fanamarihana. Izy tsy azo antoka ny zavatra tokony hatao ary avy eo dia ny lehilahy ao amin’ny efitra fandroana manokatra varavarana, ary ny telo ry zalahy miezaka ny handeha avy afa-tsy ny varavarana manosika ho azy. Ankehitriny vehivavy roa mitodika any amin’ny toeram-pivarotana lehibe amin’ny lafiny iray, ary efa niteraka ny sasany be bottleneck sy ny zazavavy no nisasaka tonga ny taratasy sy ny fahazoana natosiky ny varavarana. Zavatra tahaka izay mitranga indraindray, izy ireo dia hafahafa sy mahamenatra fa na inona na inona. Raha ny marina aho maintsy craziest ezaka tokony ho iray volana lasa izay. Efa mandeha ny toeram-pivarotana lehibe nandritra ny adiny iray sy nanolotra ny maro in-droa. Izaho efa nandidy ny sakafo ho an’ny takeout ary dia teny an-dalana haka azy fa nahita ny tenako tao ambadiky ny mafana indrindra sexy pinay aho, efa nahita tao anatin’ny iray volana. Fa hatramin’ny voalohany dia nisy maro saina mena Iray) izy dia manosika ny zaza stroller, B) izy dia amin’ny telo hafa Filipiana vehivavy. Raha ny marina aho tena azo antoka fa ny reniko sy ny samy azy ireo rahavavy. Raha ny mahazatra izany dia tsy brainer aho izay nitranga, fa indray ity dia ny mafana indrindra pinay efa hitako tamin’ny iray volana. Noho izany, dia miezaka sy hahita ny fomba tsara toerana sy fotsiny ny vintana izy ireo dia mandeha ny toy izany koa ny trano fisakafoanana aho dia mila mifidy ny sakafo niakatra avy. Ankehitriny, ny reniko sy ny iray amin’ireo rahavavy mandeha ao, ary ny iray hafa kosa dia misarika avy ny finday izany na ahoana na ahoana, raha ny marina aho hahazo ny tifitra. Handeha aho ka lazao azy izy dia ny tovovavy tsara tarehy indrindra efa hitanao ao Filipina, hanolotra azy ny isa, ary scurry eny. Ankehitriny aho dia tsy maintsy mahazo ny sakafo hariva. Efa nandoa vola ho azy, ary izaho dia tsy nanipy any dolara dimy ny henatra. Izaho handeha any amin’ny manodidina fivarotana ary miezaka ny kolikoly ny tovovavy miasa mba handeha haka ny sakafo, fa izy no freaked avy noho ny adala korontana vahiny ary milaza hoe: tsy misy na dia rehefa manolotra vola. Ny trano fisakafoanana manana fitaratra varavarankely eo anoloana sy ny tovovavy dia mazava ho azy fa mipetraka tsara amin’ny ny varavarana. Mijoro an-jorony, ary soa ihany fa hahazo ny mpizara ny saina fa nahatsiaro ahy ary nitondra ny sakafo avy amiko. Na oviana na oviana izy texted ahy, dia tena mahatsiravina fanapahan-kevitra, fa izy dia tena mafana, ary mba tiako ny manandrana izany indray raha miatrika ny zavatra toy izany amin’ny ho avy. Aho ka alaim-panahy lahatsoratra Dante super-miafina patented hafatra izao tena aza na inona na inona izay mahatonga izany dia toa tahaka ny tsy mialoha ny hanoratra izany ny tanana avy s ny ankizivavy no miasa. mampalahelo anefa fa tsy tena hizara ny ahy, efa papered ny toeram-pivarotana lehibe eto, ary tsy afaka ny hanana hafa ry zalahy mampiasa ny zavatra toy izany fotsiny ho azo antoka mametraka ny smiley na roa eo amboniny, dia eritrereto ny zavatra mety ho tianao ny mamaky, ary fizahan-toetra Ny hany fanontaniana dia hoe hatraiza ny kolikoly dia nanolo-tena ny ankizivavy, fa tsy haka ny sakafo ho anareo. Fantatro fa ny fahatelo izao tontolo izao ny firenena fa eto lol izy dia niaraka tamin’ny mpiara-miasa taminy, ary dia samy nijery ahy toy niezaka aho mba scam azy, mihevitra aho fa nanolotra toy ny dimam-polo pesos, tsy mandoa na inona na inona mihoatra noho izany mba tsy kely henatra Inona, tsy manana fotoana be dia be eto amin’izao tontolo izao mandalo ny isany avy. Ny ankamaroan’ny vehivavy dia tsy antso. Ry zalahy no miantso voalohany. Ny toerana Pina ny fitiavana no lehibe scammers. Izy ireo andian-tsoratra ny kaonty maimaim-poana, ary izy ireo hanakana azy. Ary ankehitriny. Mila mandoa vola noho ny asa fanompoana. Te-handefa any amiko ny vaovao MSN fehezan-dalàna vody izy ireo tsy hanao izany. FAMPITANDREMANA HO AN’NY PINALOVE TOERANA.
Inona ny fanajana
Asehoko foana fanajana ny vehivavy, s aho tsy manana ny firaisana ara-nofo amin’ny chat. Aho satria maneho fanajana foana. Hmm tsy mbola nanana olana mihitsy. Mbola tsy mandray karama noho izany nefa koa ahoana no scam.
Izany maimaim-poana ny toerana
Raha toa ka hanakatona ny kaonty, mitaky dimy minitra mba ho iray vaovao ary avy eo vao hafatra toy izany koa ny zazavavy ianao, nandefa hafatra ho maimaim-poana tsy mandoa. Angamba ny sasany zazavavy voalaza anao lainga, ka dia voasakana ny anao, izany no mitranga
Filipiana chat - Mampiaraka Filipina tokan-tena maimaim-poana ho an'ny Android APK-Download-ny →